Orinasa mpamokatra fararano sy ririnina, mpamatsy - mpanamboatra fararano any Shina sy ririnina
Ny lamba maivana 100% nylon, maivana famenoana famenoana, ny akanjo azo antoka sy mampahazo aina indrindra ho an'ny zanakao, mitondra mafana tsy voafehy.
Palitao gisa midina miaraka amin'ny lamba polyester 100%, 90/10 famenoana gisa, akanjo azo antoka sy ahazoana aina indrindra, manome hafanana tsy voafehy.
Ny palitao miakanjo tena tovovavy miaraka amin'ny lamba maivana 100% nylon, famenoana 90/10, ny akanjo mampahazo aina indrindra ho anao, manome hafanana tsy voafehy. Ataovy mafana foana ary miaraka amin'ny famoahana rano avo. Azo sorohina tsy ho lena mando amin'ny orana na oram-panala.
Palitao lava lava misy paosy manokana roa, tsy vitan'ny hoe manafana anao fotsiny izy io, fa mety tsara koa. Polyamide 100%
Palitao tena izy nidina tamin'ny lamba maivana 100% nylon, famenoana 90/10, ny akanjo faran'izay mahazo aina indrindra ho anao, manome hafanana tsy voafehy. Ataovy mafana foana ary miaraka amin'ny famoahana rano avo. Azo sorohina tsy ho lena mando amin'ny orana na oram-panala.
Sombin'akanjo azo zaraina roa, ny faritra ivelany dia voaaro amin'ny rivotra sy ny orana, ny ao anatiny kosa feno fomba 90 tena izy, lamaody ary malala-tanana, ny akanjo iray manontolo dia tena mafana sy mahazo aina.